FAQs - Ningbo Fanhao Butros Products Co., Ltd
Butros la shekeysan
qalab nadiif ah-up
Xadhig & la habeeyo
Ma waxaad tahay shirkad warshad ama ganacsi ah?
Ma jiraan kharashka maraakiibta raqiis ah dhoofsadaan in dalkeena?
Waayo, si yar, muujiyaan noqon doono ugu wanaagsan. Oo si bulk, jidka markab badda ayaa ugu fiican laakiin waqti badan qaadan. Waayo, amar deg deg ah, waxaanu kuu soo jeedinaynaa via maraakiibta hawada.
waxaad sameeyo karaa alaabta ku qeexan noo taraya?
Waxaan sameeyo kartaa alaabta ku qeexan haddii aad saamiga oo noo keeni doona, ama noo sheeg si faahfaahsan.
Sidee ku saabsan gudbinta waxyaabaha aad?
A: Muunado: 7 maalmood ah,
Amarada Rasmi ah: Sida caadiga ah 25 maalmood ka dib xaqiijin.
Amarada deg deg ah: Fadlan sida ugu dhaqsaha badan ka hor inta badeecada ayaa diyaar u ah noo soo sheegtaa.
A: Qiimaha waxay ku xiran tahay shayga aad dalabka (Qaab, size, tiro)
Beat oraah ka dib markii aad hesho sharaxaad buuxda ee shayga aad rabto in aad.
Waa maxay noocyada kala duwan ee lacagta aad aqbasho?
Aqbalayno T / T, L / C, DA, DP, Dheer Credit.
Haddii aan ku faraxsan ahay alaabtaada in aan helay, waxa habboon in aan sameeyo?
Haddii aad wax qalad ah la waxyaabaha our helay, fadlan qaado sawiro iyaga marka hore iyo soo diri sawirrada noo si aan xaqiijin karo waxa arrinta waa. Haddii ay tahay on Korkannagana, waxaan ka bixi doonaa badeecada iyo kuu soo diri kuwa cusub ee barakaca. The kharashka la xiriira inoogu noqon doonaa on.
Waxaan nahay isdhexgalka Wershadaha iyo Ganacsiga, waxaan ku hawlan soo saarka xayawaanka tayo sare leh iyo sidoo kale brand maxalli ah oo si fiican u yaqaan. Dhamaan waxyaabaha our ayaa dooneysa in ay keenaan milkiilayaasha xayawaanka sahlanaato badan iyo sidoo kale waxay keeni nool xayawaanka hab caafimaad. Waxaan ku hawlan yihiin naqshadaynta, wax soo saarka iyo iibinta alaabta xayawaanka.
No. 23, Bldg. 3, Chuangxin 128 Park, No. 818, Qiming Road, Yinzhou coal., Ningbo, Zhejiang, Shiinaha